Koorsada madaniga ah ee 3D ee loogu talagalay shaqooyinka madaniga ah - Heerka 2 - Geofumadas
Golayaal, dusha sare, qaybaha iskutallaabta, kuuskuus. Baro sameynta naqshadaha iyo shaqooyinka aasaasiga ah ee tooska ah ee barnaamijka 'Autocad Civil3D' ee lagu dabaqo Daraasad iyo Shaqooyinka Madaniga ah
Tani waa labaad laga soo bilaabo set ka mid ah koorsooyinka 4 ee loo yaqaan 'Autocad Civil3D ee Sahaminta iyo Shaqooyinka Rayidka' kaas oo kuu oggolaanaya inaad baratid sida loo maareeyo barnaamijkan xiisaha leh ee 'Autodesk' oo lagu dabaqi karo mashaariicda kala duwan iyo goobaha dhismaha. Noqo khabiir ku ah softiweerka waxaadna abuuri kartaa dhismeyaal dunid, xisaabin kara qalabka iyo qiimaha dhismaha waxaadna abuuri kartaa naqshado waaweyn oo jidad ah, buundooyin, bullaacadaha iyo kuwa kale.
Koorsadani waxaa loogu talagalay farsamayaqaannada, tikniyoolajiyadda iyo xirfadlayaal aqoon u leh Dhulka, shaqooyinka madaniga ah ama kuwa la xiriira, ee doonaya inay ka bilaabaan adduunka naqshadeynta waddooyinka, shaqooyinka toosan, howlaha dhulka iyo dhismaha ama kuwa doonaya inay xoojiyaan xirfadahooda maaraynta qalabkan xoogga badan.
HESHIISKA SIYAASADA BASIC (2 / 4)
1 ASSEMBLIES iyo SU-BENSAMBLES
Qaybta caadiga ah
Qeexida isu imaatinka (qaab dhismeedka).
Qaab-dhismeedka hoosaadka (walxaha noocan ah: terrace, tareenka, sardine, kanaalka, maaddada, buundada, isgoyska, iwm).
2 SHAQADA LINEAR, SURFACES iyo agabyada:
Qeexida iyo dhismaha shaqada toosan.
Meelaha shaqada toosan iyo xadka.
3. QAYBAHA ISKUULKA QALABKA
Khadadka muunad qaadista
4 CIIDAMADA CARRUURTA IYO DHAQANKA:
Xadhiga iyo warbixinnada.
Isbarbar dhigga kore
Dusha sare ee mugga
Post Previous" Hore Koorsada madaniga ah ee 3D ee loogu talagalay shaqooyinka madaniga ah - Heerka 3
Post Next Koorsada Qaabaynta Daadka - HEC-RAS oo laga soo bilaabay xoqNext »